Marka - Wikipedia
Magaalo in Shabeellaha Hoose, SoomaaliyaTemplate:SHORTDESC:Magaalo in Shabeellaha Hoose, Soomaaliya
Bartamaha magaalada Marka
Marka (Carabi: ماركا, Ingiriis: Merca, Talyaani: Merca) waa magaalo ku taala gabaldhaca magaalada Muqdisho una jirto 90 km☃☃☃☃, Marka waa caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose waxaana lagu yaqaan quruxdeeda iyo dhaqanka eey dadka degan haaystaan kaasoo aad uga duwan kuwa kale. Waxaa bariga ka jirta Badweynta Hindiy Sannadle ah sida (Shiribta,Bereyda, Heleyda IWM.), Magaalada waxay kaloo caan ku tahay soo saarida Dharka Aliindiga.waxaa dagao qabiilo badan oo somali ah iyo inyaroo carab ah qabilada somaalid waxa ugu badan magala iyoo drgana da ku teed san 80%ah bulsha ahan beesha biimaal maxamed iyo shaanshi gaamidle magalada waa maaalo taariq fac ween leh dhanka lada galankii gumaysoga talyaaniga
5 Linkiga Caddaynta
Dadka Marka jooga badanaa weey tacliin badanyahiin waxeeyna ka shaqeeystaan badda una dhoofaan wadamada Carabta sida Yemen si eey usoo iibiyaan badeecaadkooda kana soo iibsadaan kuwa kale. Badanaa waxeey yihiin Injineeryo iyo Macalimiin. Sidoo kale waxaa dadka Marka badanaa ka yimaado lagu yaqaan Qaalli iyo Ganacsada yaal. Dugsi tacliin iyo Quraan labado weey ku badanyihiin magaalada Marka waxaana caruurta lagu dheerri geliyaa inay tacliin tooda ka fikiraan si eey u caawiso mustaqbalkooda inkastoo uu hadda dowlad la'aanta eey ka tanbadisay waalidiinta meesha dagan ku waasoo dhib eey ku tahay in eey bixiyaan lacagta dugsiga ama jaamacadda.
File:Magaalada marka 2.jpg
Magaalaga marko waxey ka kooban tahay sadex xaafadood oo kala ah Horseed, Wadajir iyo Howlwadaag waxaana waxaa hoos taga xaafado yar 1- Horseed waxaa hoostaga --- Bulajaan Buufow iyo Lumabardi 2- Wadajira waxaa hoostaga ---- Saraha Beyturaas iyo Awbaale 3- Hoolwadag waxaa hoostaga ---- Xaafa Ruushiya, Sheekh Abroone
Sidoo kale magaalda Marka waxey leedahay hoteelo caan ah dalxiisna loogu imaado sida , Hotel Madiina iyo kuwo kaloo la mid ah. Waxaa kaloo laga heli karaa magaalada Marka maqaayado la fadhiisan la cunaayo sida sambuuska, bajiyaha, kabaabka . Suuqyaasha ku yaalo magaalada waa labo suuq po kala ah kaas oo ku yaalo horseed midna wa Suuqa Weyn ee magaalada Marka. Dadka magaalada Marka joogo badanaa ma cunaan hilibka sida loogu cuno qeybaha kale ee dalka. Dadka badanaa waxeey cunaan malaayga ama kaluunka iyo doorada . Waxaa galabyadii lagu yaqaan in aay cunaan macmacaan yada caanka ka ah Koonfur Soomaaliya ku waasoo lagu cabo qaxwo kharaar. Marmarka qaarne waxeey cunaan bajiye iyo sambuus iyo bisbaas.
Dadka Marka degan waxeey leeyahiin lahjo af somali ah iyo ku gaar ah taasoo u dhaw mida loogu hadlo Xamar. Lahjadaan waxaa loo yaqaan Af Marka ama Af Asharaaf waxaana badana ku hadlo dadka gibilcadka iyo lahjad arow la dhaho oo ay ku hadlaan Biyomaalka ee degan koonfurta wadanka. Dadka Reer Marka waxey dhahaan;
" Marka Cadeey, Minin Ow Osman, Muufo kuus kuus iyo macmacaan, Martidii moodo munaafaq waaye."
Taasoo aay ka wadaan qof walbo waa inuu magaalada soo booqdaa oo uu nan dhaafin haddii uu imaado kuunfor Soomaaliya. Waxeey ka wadaan Marka waa gurigii Ow Osman kaas oo ahaa nin caan eh waano magaalo lagu yaqaano cuntaba tii uugu macaanayd ee wadanka taalo. Marti walbana waa inay soo booqataa mar intey nooshahay.
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Marka.
Magaalooyinka Gobolka Shabeellaha Hoose
Afgooye · Awdheegle · Baraawe · Kurtunwaarey · Marka · Qoryooley · Sablaale · Shalaanbood · Wanlaweyn
Degmooyinka Gobolka Shabeellaha Hoose
Afgooye · Awdheegle · Baraawe · Kurtunwaarey · Marka · Qoriyooley · Sablaale · Wanlaweyn
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Marka&oldid=231266"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Febraayo 2022, marka ee eheed 11:16.